लामो कपाल येशू अक्सर वर्णन, तर बाइबल बारेमा &
क्लिपबोर्ड केही कलाकारहरूको येशूले कसरी कसरी देखिन्छ जस्तो लाग्छ।
"म जो बाहिर मेरो दाढी झिकेर ती मलाई र मेरो गाला पिटे गर्नेहरूलाई मेरो फिर्ता दिए। म लाज र थूकना मेरो अनुहार लुकाए "- यशैया 50:। 6।
मा चलचित्र र तस्बिरहरू लामो कपाल र beards येशूले चित्रण गरिएको। तिनीहरूले भन्छन् किनभने त्यो बाइबल दारी छ "मेरो दाढी बाहिर झिकेर।" बाइबल वचन अन्यथा येशूको कष्ट र टाँग्ने एक भविष्यवाणी छ। तर उहाँले लामो कपाल छ भनेर ग्रहण गरिएको छ?
छोटो कपाल छ
अब यो बाइबल येशूको बारेमा बाल लम्बाइमा कतै छ तर त्यहाँ येशूले छोटो कपाल भएको संकेत कि धर्मशास्त्रमा छन्। पावलले यो एक मानिस लामो कपाल छ लागि लाजमर्दो छ कि लेख्छन्।
वा धेरै प्रकृति तपाईं यसलाई उहाँले लामो कपाल छ भने एक मानिस लागि लाजमर्दो छ कि सिक्न छैन? - 1 कोरि। 11:14।
तर जो लामो कपाल थियो Nazarites थिए ती थिए। Nazarites उदाहरण, सिम्पसन र यूहन्ना बप्तिस्मा दिने लागि थिए।
"तर प्रभुको दूत महिला देखा पर्नुभयो र उसलाई भन्नुभयो:"। हेर, तपाईं बाँझो छन् र कुनै पनि छोराछोरीलाई जन्म दिएको छैन, तर तपाईं गर्भ धारण र एक छोरा [सिम्पसन] सहन पर्छ अब पक्का रक्सी वा बलियो पेय पिउन छैन बनाउन र अशुद्ध केहि खान छैन। हेर लागि, तपाईं कल्पना गर्नु र एक छोरा सहन गर्नेछु, र को लागि केटा गर्भबाट परमेश्वरको एक Nazarite हुनेछ आफ्नो शिरमा, कुनै छुरा आउन पर्छ। उहाँले पलिश्तीहरू को हात बाट इस्राएलका उद्धार सुरु हुनेछ। " - न्यायकर्त्ता 13: 3-5
लागि उहाँले [यूहन्ना बप्तिस्मा दिने] प्रभु अघि ठूलो हुनेछ। वाइन र बलियो पेय उहाँले पिउन छैन, र गर्भबाट, उहाँले पवित्र आत्माले भरिएको हुनेछ। - लूका। 1:15।
आफ्नो लामो कपाल देखि अलग सिम्पसन पनि सात braids थियो।
डोम 16:13: "दलीला शिमशोनलाई भन्नुभयो," अब तिमी मलाई धोका र मलाई झूट छ सम्म। तपाईं आफ्नो कपडा गर्न ताना मेरो टाउको को सात ताले Weave भने, राम्रो "": अब कसरी तपाईं बाँध मलाई बताउन "उहाँले तिनलाई भन्नुभयो"।।
एक Nazarite रक्सी पिउने छैन सहित थियो। तर उहाँले रक्सी पिए किनभने येशूले एक Nazarite थियो र यसरी हामी त्यो लामो कपाल छैन भनेर बुझ्न।
"मानिसको पुत्र [येशूले] आए, र उहाँले खाने र पेय, र तपाईं भन्न: हेर, एक glutton र drunkard, publicans र पापी मित्र" - लूका 7:34
म येशू लामो वा छोटो कपाल छ कि अनलाइन धेरै पढ्न छन्। यो यस बारेमा लिखित धेरै छ किनभने यो मुद्दा धेरै धेरै कार्यरत गरिएको देखिन्छ।
नेट मा मेरो खोजी म एक पाएका छन् पृष्ठ येशूले आज अर्थोडक्स यहूदी पुरुषहरूले रूपमा कट थियो भन्छन् कि।
"आफ्नो टाउको वा क्लिप आफ्नो दाढी को किनाराको बन्द को पक्ष मा बाल कटौती नगर्नुहोस्।" (3 MOS 19.27)
3 उत्पत्ति परमेश्वरले तिनीहरू आफ्नो दाढी र बाल हेरचाह थियो कसरी पूजाहारीहरूले, र समुदायको अलग-अलग मानिसहरू आज्ञा दिनुभयो। येशूले पनि यस पछि भनेर विश्वास गर्दछन्। तर यहाँ म धेरै पढ्न लाग्छ।
हामीलाई मानिसजातिले जस्तै भयो
होइन, त्यो यहूदी जस्तै यो जहाँसुकै समयमा देख्यो। उहाँले कुनै फैलएको उपस्थिति थियो। उहाँले "मानव जगतले जस्तै भयो" (:7फिलिप्पी 2) कि बाइबल मा वास्तव छ।
... जो तिनले परमेश्वरको को रूप मा थियो जब परमेश्वरले संग बराबर एक looted धन रूपमा सन्दर्भमा थिएन, तर आफूलाई अप दिनुभयो, र एक सेवक को फारम लिए, र हामीलाई मानिसजातिले जस्तै भयो। - फिलिप्पी 2: 6-7।
उहाँले देशद्रोही यहूदा सिपाहीहरूले येशूलाई तिनीहरूले Resort भनेर थियो थाहा थियो कि एक चिन्ह रूपमा चुम्बनले उहाँलाई धोका रूपमा हामी बुझ्न जो सामान्य उपस्थिति थिए।
चटाई 26:48: धोका दिने तिनीहरूलाई चिन्ह, यसो भन्दै दिनुभएको थियो ", उहाँले उसलाई gripping, त्यहाँ छ जसले म चुम्बन।"
येशूले एक साधारण मानिस जस्तो भए तापनि आफ्नो देवत्व चम्कने जो मार्फत यो एक समयमा गरे सक्छ।
"अनि उहाँले तिनीहरूलाई अघि transfigured थियो: सूर्य जस्तै आफ्नो अनुहार shone, र आफ्नो लुगा ज्योति जस्तो सेतो भयो।" - मत्ती 17: 2
त्यहाँ वास्तवमा येशूले वर्णन बाइबलमा एक ठाउँमा यसको लम्बाइ छ, तर छैन। बौरिउठ्नुभएको येशूले Patmos मा प्रेरित यूहन्नालाई प्रकट गर्दा यो छ।
र उनको टाउको र कपाल हिउँ जस्तो सेतो रूपमा ऊन जस्तो सेतो थियो, र आफ्नो आँखा आगोको एक ज्वाला रूपमा थिए। - माथि 1:14।
के तपाईं येशू कसरी चिन्नुहुन्न
V 02, lördag 16 januari 2021 kl 21:29